Canabku ma yahay dheemankii ugu adkaa ee ganacsiga bulshada? | Martech Zone
Talaado, Juun 9, 2015 Monday, June 8, 2015 Douglas Karr
Intii aan joogay IRCE, Aad ayaan u farxay markii mid hadlay, Danny Gavin, uu i joojiyay oo ii sheegay in uu i arkay aniga oo hadlaya sanado ka hor munaasabad ka dhacday Austin. Danny waa mid ka mid ah suuqgeyaasha ugu waaweyn ee internetka… horumarinta suuq geynta internetka iyo ololaha warbaahinta bulshada Dheeman Brian Gavin. Khibradiisa, wuxuu ka caawiyay inuu BGD ku riixo darajooyinka Shirkadaha E-Ganacsiga ee 1000 iyo 50 Shirkadaha E-Ganacsiga ee Ugu Koraya.
Waxaan la wadaagi doonaa qaar ka mid ah waxyaabaha cajiibka ah Canabka BGD loops oo dhan post this ka Brian Gavin Diamonds, si aad u geliso muuqaallo muuqaal ah sida ay u siman yihiin barxadda.
Laga soo bilaabo Fikirka ilaa Naqshadaynta
Waxaan waydiiyey Danny sababta uu halkaas uyimid wuxuuna ii sheegay inuu ka hadlayo guusha cajiibka ah ee BGD uu la soo qaatay Vine. Oo halkan kama hadlayno tirooyin yaryar:
Iyadoo la adeegsanayo saamileyaasha Vine, BGD waxay awood u yeelatay inay gaarto in ka badan 6 milyan oo looxyo oo ku yaal Vine (oo ah qiyaastii 2 milyan oo qof) iyo in ka badan 445 saamiyada barta Twitter.
Ololahooda Vine-ka waxay ka heleen aqoonsi sare qoraalo kala duwan, sidoo kale waxay kujireen # 2 kaliya Tiffany's ololaha xayaysiinta dukaanka dahabka ee 2014 (JCK).
In kasta oo hoos u dhac ku yimid iibka tartameyaasha intii u dhaxeysay Black Friday iyo Christmas, BGD waxay heshay rikoor 45% YOY ah iyo sidoo kale 13% YOY oo ku kordhay Q1 ee 2015.
BGD sidoo kale waxay aragtay koror 20% oo ah taraafikada tooska ah ee loo maro barta internetka laga soo bilaabo qeybtii hore ee 2014.
Taasi maahan hawl fudud marka loo eego tartanka gardarrada ah ee warshaddan ka socda. Dheeman Brian Gavin waa dahab isku qurxiyo caadiyan iyo dheeman e-tailer dheeman ah oo isku dayaya inuu kordhiyo wacyiga sumadda ee internetka isagoo la tartamaya miisaaniyadaha baaxadda weyn ee tartamayaasheeda.
Caqabada ayaa ah in BGD ay u baahneyd in la helo hab wax ku ool ah oo wax ku ool ah oo lagula tartamo tartamayaasha internetka iyo kuwa maxalliga ah iyada oo loo marayo adeegsiga warbaahinta bulshada ee dejin doonta aqoonsiga astaanta oo kordhin doonta taraafikada webka iyo kordhinta iibka.
Istaraatiijiyadda Danny waxay ahayd in la abuuro jadwal tifaftiran oo rogrogmi kara kaas oo u oggolaaday BGD inuu ka faa'iideysto dhacdooyinka waqtigooda iyo khuseeya isagoo sii deynaya fiidiyowyo toddobaadle ah oo madadaalo iyo xiise u leh barxadda aadka loo wadaagi karo.
Waxay soo saareen fikradaha ku saabsan jadwalka taariikhda tifaftirka, waxay soo saareen waxyaabaha fiidiyowga ah, waxayna ku dhiirrigeliyeen kanaalladooda warbaahinta bulshada iyo sidoo kale saamileyaasha Vine ee ay la xiriireen.
Qaabka iyo qaabka farriinta hal-abuurka ahi waxay ahayd in la waafajiyo joogitaankeenna internetka iyo muuqaalkeenna offline-ka ah ee xarrago iyo hal-abuur leh Si aan ula tartano tartamayaasha miisaaniyada sare, waxaan ubaahanahay inaan doorano qaab dhexdhexaad ah oo ay bartilmaameedyaashooda (18-44) ahaayeen, laakiin halka aysan tartamayaashayadu joogin.
Isticmaalka Vine, BGD kaliya ma awoodin inuu dhagaystayaasha da 'yarta ah (18-20) ee barxadda, laakiin sidoo kale dhagaystayaasha Twitter (18-49) sababtoo ah wadaagga sare iyo isdhexgalka labada barxadood. Mawduucu waa mid muuqda, oo xiiso leh, oo gaar ah, laakiin wuxuu u socdaa si xawli ah si uu uga dalbado daawadayaasha inuu markale daawado.
Noocyada fiidiyowyadan waxay ku xiran yihiin jiilka guurguura (taas oo u janjeedha dhinaca tirakoobka dadka da'da ah ee aqoonta leh) waana ku yar yihiin in lagu mashquuliyo oo wax la baro iyada oo aan waqtiga laga lumin daawadayaasha. Habkan iyo dhawaqani waxay wax ku ool u ahaayeen wadista taraafikada websaydhka iyo sidoo kale wadista iibka.
Xiddigaha Isku toosan
Waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa Danny oo iga caawiyey inaan isku dhajiyo qoraalkan! Hubso inaad booqato Dheeman Brian Gavin dahabkaaga caadada kuu ah!
Tags: dheeman brian gavinDaraasad dhacdodanny gavinganacsiga bulshadaganacsiga bulshadageedka canabka ahololaha canabka ahdaraasad kiis geedka canabka ahganacsiga canabkawareegyada geedka canabka ahnatiijooyinka geedka canabka ah